Norway Oo Taageero Dhaqaale Siinaysa Hay’ado Ka Tirsan QM Si Ay Gargaar Beni’aadannimo Dalka Uga Hirgeliyaan | Somali National Television - sntv.so
Home WARARKA MAANTA Norway Oo Taageero Dhaqaale Siinaysa Hay’ado Ka Tirsan QM Si Ay Gargaar...
Norway Oo Taageero Dhaqaale Siinaysa Hay’ado Ka Tirsan QM Si Ay Gargaar Beni’aadannimo Dalka Uga Hirgeliyaan
Qaramada Midoobay ayaa ku dhawaaqday in la kordhiyo baahiyaha arrimaha Beni’aadannimada sanadka 2020-ka iyadoo loo eegaayo dagaallada waqtiga dheer iyo roobabka xilligan oo aanan da’in cimilada darteed.
Sanadkan, Norway ayaa bixinaysa lacag dhan 420 milyan oo ah Shilinka Norway taasi oo ay ugu deeqayso Santuuqa Dhexe ee Ka jawaaba xaaladaha deg-degga ah ee QM kaasi oo loo soo gaabiyo (CERF) iyo Sidoo kale 90 milyan oo ay siinayso xafiiska Isku xirka Arrimaha Beni’aadannimada QM ee UN (OCHA).
Wasiirka Arrimaha Dibadda Norway Ine Eriksen Søreide oo ka hadashay arrintani ayaa sheegtay ‘In Kharashkani ay bixinayso Norway lagu xaqiijinayo si ay uga caawiso
In hay’adaha ay ka jawaabaan meelaha ugu saameynta badan oo ay ka jiraan arrimaha beni’aadantinimada, iyadoo ay barbar socoto istaraatijiyadda dhanka beni’aadantinimada’, ayay tiri Ine Marie Eriksen Søreide.
QM ayaa sheegtay in lagu qiyaasay, 167.6 milyan oo qof ay u baahnaan doonaan gargaarka beni’aadantinimada iyo hooy sanadkan 2020.
Iyadoo Jamciyadda Quruumaha ka dhaxeysa codsigii ay u jeedisay dunida ay ku codsatay sanadkan 2020-ka is la siiyo lacag dhan 28.8 bilyan oo doolarka Mareykanka ah.
Norway ayaa ka mid ah dalalka deeqaha ugu badan siiya Sanduuqa Dhexe ee Ka Jawaabista Xaaladaha Deg-degga ah ee QM ee Loo soo gaabiyo (CERF).
CERF waxay xaqiijinaysaa in kaalmada si dhaqsiyo badan loo gaarsiiyay dadka ay saameeyeen mashkiladaha dhinaca beni’aadantinnimada. Waxaana ay sidoo kale bixinaysaa lacagaha sida aadka ah loogu baahan yahay ee loogu talo galay in lagu kharash gareeyo xaaladaha deg degga ah.
Sanad walba, 20 milyan oo qof ayaa hela kaalmada caafimaadka degdegga loogu baahan yahay iyadoo loo soo marsiiyo hay’adda CERF, halka 10 milyan oo qof ay helaan gargaar cunno. Sanadkii 2019-kii, CERF waxay kharash gareysay 47 dal si loo yareyo mashkiladaha ka taagan dhinaca beni’aadannimada kuwaasoo ay ka mid ahaayeen dalalka Soomaaliya, Jibuuti, Yemen iyo Dalka Venezuela.
Sanadkani, CERF waxay gacan ka geysatay sidii looga hortagi lahaa xalna loogu heli lahaa Anyaxa Saxareedka oo dhibaato badan ku haya wadamada Bariga Afrika, iyadoo sidoo kale gacan ka geysatay sidii hooy iyo hu loo gaarsiin lahaa meelaha dadka ay sida aadka ah baahi ugu qabaan sida goobaha dagaalku haleelay ee Dalka Niger. QM ayaa waxay door ka qaadata xaqiijinta isku xirka, Qorsheynta iyo hirgelinta jawaabaha Beni’aadannimada.
‘Sida wanaagsan ee QM waxa ay muhiim u tahay xaqiijinta in tallaabo beni’aadannimo ay ka shaqeysiin karto si wax looga qabto dadka ay wajaheen mashaakilaadyada ugu badan. Xiriiriyeyaasha Jamciyadda Quruumaha ka dhaxeysa iyo Xafiiska QM ee Isku xirka Arrimaha Gargaarka ee (OCHA) ayaa iyaguna ka qaata doorkoodu muhiimka’, sidaasi waxaa sheegtay wasiirka Arrimaha dibadda Norway Ms Eriksen Søreide.
Sanadka 2020-ka, Norway waxay bixinaysaa 90 milyan oo doolar oo lagu kharash gareynayo dadaalada hay’adda OCHA si korloogu qaado tallaabada isku xiran ee beni’aadannimada. Sidoo kale, waxay Norway, waxay taageero ku bixin doontaa xafiisyada ay ha’adda OCHA kuleedahay wadamada iyo dhaqaale kale oo loogu talo galay wadamada aadka unugul ama saboolnimada ay ka jirto.
Mid kamid ah shaqada beni’aadannimada ayaa ah in la xaqiijiyo badbaadada islamarkaana la saacido dadka gudaha ku barakacay. Hay’adda Qaxootiga ugu qaabilsan ee (UNHCR), in ka badan 41 milyan oo qof oo dunida dacaladeeda ku kala nool ayaa lagu barakiciyay gudaha wadamada dhammaadkii sanadkii 2018-kii. Tiradani ayaa ah mid sii kordhaysa, waxaana jirta baahi loo qabo si loo kordhiyo jawaabta laga bixinayo arrintani.
3-dii bishii Diceember sanadkii la soo dhaafay, Xoghayaha Guud ee QM ayaa aas aasay guddi heer sare ah oo ka shaqeya arrimaha barakacinta, waxaan loo xilsaaray in tallooyin ka keenaan sidii dalalka ay kunool yihiin dadka barakacay ay u siin lahaayen badbaadada ay u baahan yihiin, iyo sidii xulal waara looga gaari lahaa mashkiladaha ku gidaaman dadka soo barakacay.
Norway waxay si fir fircoon u taageertay hindisahan waxayna ku bixin doontaa 6.55 milyan oo lagu maalgelinayo miisaaniyadda sanadkani ee Beni’aadannimada taasi oo uu Xoghayaha Guud u dhisay sidii loo taageeri lahaa in Guddigani uu Shaqeeyo.
Waxaa Tarjumay Maxamednur Max’ed ‘Johannesburg’
Previous articleArdayda Deegaanka Guriceel Oo Ka Qeyb Galay Dhismaha Wadada Dhuusamareeb Ku xirta Guriceel ‘Sawirro’.
Next articleBaarlamaanka Mororco oo Sheegay in dhulka Falastiin aan la Bixin Karin.